Xaruntii ugu weyneyd ee lagu sameyn jiray Qamriga oo la burburiyay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xaruntii ugu weyneyd ee lagu sameyn jiray Qamriga oo la burburiyay
Xaruntii ugu weyneyd ee lagu sameyn jiray Qamriga oo la burburiyay
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sameeyay Howlgal gaar ah oo qorsheysnaa ayaa waxa ay ku burburiyeen goob lagu farsameyn jiray waxyaabaha maanka dooriya oo ku taalla degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada oo Howlgalkooda uu ku wehlinayay Guddoomiyaha degmada Kaaraan ayaa waxaa sidoo kale u suuragashay in ay gacanta ku dhigaan Saddex ka mid ah raggii Calaqa Karin jiray iyo qaar ka tirsan dadkii iibsan jiray, kuwaasi oo hada ku xiran saldhiga degmada Kaaraan.
C/fataax Xaaji Nuur Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in Waaxda Nageyle ee degmada Kaaraan laga sameeyay howlgalka oo lagu burburiyay xaruntii ugu weyneyd ee lagu karin jiray Calaqa.
Sawirro laga soo qaaday goobta Howlgalka laga sameeyay ayaa waxaa ka muuqanayay Digsiyaal lagu Karin jiray Calaqa iyo Fuustooyin caagag ah oo lagu shubi jiray Calaqa, kuwaasi oo dhammaan ay burburiyeen Ciidmaada ammaanka.
Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa maalmahan waxaa ka socda Howlgal gaar ah oo lagu beegsanayo raga dareeska Ciidanka dhaca ku geysta iyo kuwa fallaka amni daro kula kaca shacabka.